पूर्वजर्सा’बसँग अख्तियार थुरुरुः कालो धन लुकाउन यस्तोसम्म खेल | Citizen Post News
पूर्वजर्सा’बसँग अख्तियार थुरुरुः कालो धन लुकाउन यस्तोसम्म खेल
२०७५ चैत्र २६ गते १०:३२
काठमाडौं । स्वस्थानी ब्रतकथामा एउटा भनाई छ-ब्रतालुले प्रसादचाहिँ पति भए पति, पति नभए छोरा, छोरा नभए मित छोरालाई दिनू ! त्यो पनि नभएचाहिँ खोलामा बगाउनू । यहि भनाईसँग ठ्याक्क मेल खान्छ, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिको अवैध धन लुकाउने र संरक्षण गर्ने कथा ।
नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका बाहलवाला र पूर्वप्रमुखको सम्पत्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी दायरा भए पनि नेपाली सेनाका बाहलवालाको कुरा छाडौं, पूर्वप्रधानसेनापतिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने त परै जाओस् सोध्न पनि सैनिक मुख्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्बपति जर्साबहरू अघाएर गुफामा बसेको बाघजस्तो हुन्छन् ।
यो कथा हो-पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको । आफू पदमा हुँदा अकुत सम्पत्ति अवैध ढंगबाट जम्मा पारेका उनलाई हाइसञ्चो छ । किनकी अहिले रहेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उनलाई छानबिनका लागि कुनै कदम चाल्दैनन् भन्ने ध्वाँस देखाउँछन् । कारण-नातामा मावली पर्छन् । क्षेत्रीको भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर समाचार आउँदा पनि सैनिक जंगी अड्डाले यस विषयमा ध्यान नदिनु वा ध्यान दिएर पनि कुनै कदम नचाल्नुले यहि शंकालाई जन्माउँछ ।
क्षेत्री प्रमुख रहेका बेला विभिन्न युनिटमा राशन ठेक्कामा भएका घोपला र पाएको दुखका विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परिसकेका छन् । ति निकायले सेनालाई पनि यस विषयमा सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यहाँसम्मकी जंगी अड्डामा थापाकै टेबुलमा पनि यो उजुरी र साथमा फाइलका थाक पुगेका छन् । तर, कारबाही अघि बढेको छैन, नबढ्नुको कारणबारे सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय सम्पर्कमा नै आउन चाहेन ।
एक उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्,‘चिफको आदेश बिना कुनै पनि भ्रष्टाचार हुँदैन, चिफले भनेपछि सबै कुरा हुन्छ । क्षत्री अहिलेसम्मकै बदनाम र बद्नियत राख्ने चिफ थिए । तर, उनलाई कसरी छानबिन होला ? उनले त्यो सेटिङ आफू हुँदा नै गरेका थिए ।’ त्यसो त आफूइतरका पूर्व सैन्य अधिकारीलाई पनि नछाड्ने नियत सेनामा नदेखिने होइन । त्यसको उदाहरण हालैमात्र भएको एउटा निर्णयले पुष्टि गर्छ । पूर्व सहायक रथीद्वय धर्म बानियाँ र प्रेमसिंह बस्न्यातलाई कारबाीहका लागि सैनिक मुख्यालयले पत्र पठाएको बताइएको थियो ।
बस्न्यातले त बद्नियतका हिसाबमा यस्तो निर्णय आएको सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । कसले गरेको हो ? यस्तो बद्नियत ? यस्तो नियतीमा त तत्कालिन चिफ क्षेत्री पनि पर्नुपर्ने होइन ? उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहलाई सरकारले गरेको प्रतिबन्धका विषयमा सार्वजनिक रूपमा मिडियामा बोलेको चर्चा चलेको थियो ।
क्षेत्रीका भ्रष्टाचार के-के मा ?
बाहलवाला हुँदादेखि नै क्षेत्रीको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा समाचार नआएका होइनन् । उनले देशभरी सैन्य युनिटमा खाना पकाउने चुल्होको ठेक्कामा करोडौं कुम्ल्याएका थिए । सिन्डिकेटमा रहेका ठेकेदारहरूसँग एवम् प्रकारले कमिशन माग गर्ने उनले चार सय करोडको चुल्हो ठेक्कामा ४० करोड बढीको भ्रष्टाचार गरेको सैन्य स्रोतले जनाएको छ । त्यसबाहेक पछिल्लो पटक उनले राशन प्रकरणमा पनि दुख दिएको, उनकै कार्यकालमा विभिन्न युनिटका ठेक्कामा आफू मारमा परेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले नै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको छ ।
ठेक्का हात पारेपछि दबाबमा राख्ने, व्यक्तिगत नियतमा पेल्ने र बैंक ग्यारेन्टीको रकम पनि जफत गराई महँगो मुल्यमा राशन किनेर सिपाहीको खानामा करोडौं घोटाला गरेका विवरणहरू सुरक्षित छ । जुन, क्षेत्रीका कार्यकालमा नै भएको थियो । यतिमात्र होइन, पीडितले जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दाका विषयमा छलफलका लागि सैन्य अधिकारीलाई बोलाइएको पनि छ । क्षेत्रीले मकवानपुरको जग्गामा पनि घोपाला गरेको विषय चर्चामा आएको थियो । उनले महँगो मुल्यको जग्गा बैंकबाट सस्तो मुल्यांकन गरी खरिद गरेका थिए ।
अवैध धन लुकाउन के-के हुन्छ ?
यसै पनि पूर्व सैन्य प्रमुखलाई राज्यले नै आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा दिएको छ । खासगरी राज्यको उक्त रकम सेनामार्फत उनका घरमा पुराउनेमात्र होइन, सैनिकका जागिरेलाई अर्दली समेत राखिने गरिएको छ । जसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । दुनियाँको कुनै मुलुकमा पनि यस्तो प्रकारको नियम छैन । बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेका एक जना क्याप्टेनले भने,‘शक्तिमा भएसम्म मात्र सुविधा पाउने हो, नेपालको ताल त छक्कै पर्छु आजीवन सुरक्षा र सेवा पाइन्छ ।’
यसबाहेक आफ्नो कार्यकालमा घोटाला गरी कमाएको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय, उच्च अदालत, महान्यायाधीवक्ता र सैन्य संगठनका अधिकारीसहितको अदालतमा छानबिन हुन सक्छ । त्योचाहिँ सैनिक जंगी अड्डाको निर्णयका आधारमा हुने गर्छ । तर, आजसम्म सैनिक प्रमुखले त्यसरी भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन गरेको कुनै नजिर छैन । जबकि, पूर्वप्रधानसेनापतिको सम्पत्ति विवरण सरकारका अन्य निकायले छानबिन गर्ने हो भने अर्बौंको मुल्यांकन हुन्छ ।
क्षेत्रीका सन्दर्भमा नै छानबिन गर्ने हो भने उनको जागिरे जीवनकाल, घर र ससुरालीको सम्पत्तिको तत्कालिन विवरण र उनको कार्यकालपछिको विवरण मुल्यांकन गर्दा अवैध धन कति छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । स्रोतहरू भन्छन्,‘राजाको भन्दा बढी सम्पत्ति जोडेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो पनि हुन्छ ?’ यसरी कमाएको धन लुकाउने कानुनी दाउपेच जानेकै कारण आफू रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) हुनु अगावै आफूलाई संरक्षण गर्नेलाई उक्त पदमा आउने बाटो खुलाउने प्रपञ्च सेनाभित्र हुने गरेको छ । यो प्रपञ्च हुने प्रमाणका रूपमा सैन्य प्रमुखको लाइनमा रहेका तर अन्यायपूर्वक कारबाहीमा पारिएकाहरूले रक्षा मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म दिएको उजुरी र मुद्दा नजिर हुन् ।
दलितको बजेटमा सिडिओ-डिएसपीदेखि नेतासम्मलाई कोट
२०७६ साउन १ गते ११:४४
रुपज्योतीको ठगीः कारबाहीबाट बच्न उल्टै पीडक सर्वोच्चको शरणमा
२०७६ साउन १ गते ११:१६
अवैध हातहतियारसहित राई र लिम्बु समातिए
२०७६ साउन १ गते १०:३५
८० लाख रुपैयाँ ठगी: सामान पठाउँछु भन्दै पैसा लिने तर नपठाउने तीन समातिए
२०७६ साउन १ गते ०९:५०
नमस्ते मेहेन्दी महोत्सवः यसरी हुँदैछ श्रावण महिनाको स्वागत
२०७६ असार ३१ गते ११:१०
अमेरिकी कट्टर विरोधीलाई बालुवाटारमा निषेध, खुमलटारमा स्वागत !
२०७६ असार ३१ गते १०:२७
विप्लवसँग बार्ताः 'पहिला जेलमा जाक्ने, संकट परेपछि बालुवाटार डाक्ने'
२०७६ असार ३१ गते १०:०७
हिन्दू राज्यबारे भ्रम र यर्थाथः उता मेलमिलाप यता अर्कै विलाप
२०७६ असार ३१ गते ०९:५७
'सी ग्रेड' का काभ्रेली गुण्डा निमा कोटेश्वरबाट पक्राउ
२०७६ असार ३१ गते ०९:०७
भ्रष्टलाई तह लगाउँदै अख्तियार, उपकुलपतिसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
२०७६ असार ३० गते २०:४४